क्लोरोफर्म सुघाउँदा बिरामीको मृत्यु
२०७५ असोज २५ बिहीबार १३:१३:००
वीर अस्पतालमा नेपाली डाक्टर भेट्न मुस्किल थियो, बंगाली डाक्टरहरुको बर्चस्व थियो । वीर अस्पताल स्थापना भए पनि सेवासुविधाको अभावका साथै डाक्टरहरु पनि कम थिए । त्यसैले भरखरै एमबीबीएस सकेका डाक्टरहरुको ध्यान काठमाडौंतिर हुन्थ्यो ।
डा. गौरीशंकर लाल दास (९५) लाई पनि काठमाडौं जान सुझाइयो । पटना मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका उनलाई एकजना आफन्तले काठमाडौं आउन प्रेरित गरे । उनी रक्सौलमा राहदानी लिएर भीमफेदीको बाटो हुँदै काठमाडौं उक्लिए ।
लोकसेवा आयोगको गठन भइसकेको थियो । लोकसेवामा उनले अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्ताका क्रममा डा. जितसिंह मल्लले उनलाई सोधेका थिए, ‘टन्सिलको अपरेसन कसरी गर्नुहुन्छ ?’ उनले आवश्यक जवाफ दिए ।
२००९ सालमा डा. गौरीशंकरले वीर अस्पताल प्रवेश गरे, रेसिडेन्सियल मेडिकल अफिसर (आरएमओ)का रुपमा । मेडिसिनमा उनले गरेकोे काम राम्रो मानियो । उनीसँग प्रभावित भए डा. यज्ञराज जोशीलाई । उनी छाती रोगका डाक्टर थिए । उनले डा. गौरीशंकरलाई टोखा सेनिटोरियममा पठाउने सोचिरहेका थिए ।
एक दिन काम सकिएपछि उनी डा. दिनेशानन्द वैद्यकहाँ पुगे । उनी असाध्यै चाखलाग्दो कुरा गर्ने मान्छे । डा. वैद्यको बसाई अस्पतालभन्दा दक्षिणतिर थियो । फुर्सदमा डा. गौरीशंकर त्यहाँ पुग्थे ।
एकदिन वैद्यकहाँ गौरीशंकर बसिरहँदा स्वास्थ्य विभागका तत्कालीन निर्देशक डा. जितसिंह मल्ल आइपुगे जिप लिएर । उनले डा. गौरीशंकरलाई घुम्न जाउँ भने । विभागीय निर्देशकले भनेपछि नाइँ भन्ने कुरो पनि भएन । बूढानिलकण्ठको बाटो हुँदै टोखा पुगे । उनी छक्क परिरहेका थिए, कहाँ आइपुगियो भनेर ।
टोखा उनलाई बडो मनमोहक लाग्यो । उचाईमा रहेको खुल्ला तथा रमणीय स्थानले उनको मन मोहित भयो । त्यस दिन टोखा अस्पताल हेरेर उनीहरु काठमाडौं फर्किए ।
गत मंगलबार चाबहिल मित्रपार्कस्थित निवासमा कुरा गर्दै वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. गौरीशंकर लाल दासले सम्झिए त्यो क्षण, ‘टोखाबाट फर्किएपछि मलाई डाक्टर मल्लले सोध्नुभयो– टोखामा काम गर्न जानु हुन्छ ? त्यहाँ जानु भयो भने तलब बाहेक २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पनि पाइन्छ ।’ त्यसबेला मेरो तलब दुई सय थियो । एक सय ८० तलब र २० रुपैयाँ भत्ता । त्यसमा अर्को २ सय ५० थप आउने भएपछि किन नजाने भन्ने लाग्यो । मैले हुन्छ भनेँ ।’
केही दिनपछि डा. गौरीशंकरको सरुवा टोखा अस्पतालमा भयो । आफूलाई त्यहाँ हतारमा पठाउनुको कारण उनले अस्पताला पुगेपछि मात्रै थाहा पाए । कारण थियो, त्यहाँ पहिले एकजना अर्का मेडिकल प्राक्टिसनर काम गर्थे । जसलाई एलएमपी अर्थात लाइसेन्स मेडिकल प्राक्टिसनर भनिन्थ्यो । उनीभन्दा अगाडि टोखामा मेडिकल अफिसरका रुपमा कार्यरत ती व्यक्तिले हिनामिना गरेका रहेछन् । उनले बिरामीले पाउने रासनमा घोटाला गरेका रहेछन् ।
त्यो थाहा पाएपछि त्यहाँका सबै बिरामीहरुले हडताल गरेछन् । जब डा. गौरीशंकर टोखा सेनिटोरियम पुगे, त्यसपछि मात्रै त्यो हडताल शान्त भयो । त्यहाँ उनले २०१०देखि २०१८ सालसम्म काम गरे ।
सिरहाको लहाननजिकको इनरवा गाउँमा १९८१ सालमा जन्मिएका डा. गौरीशंकरको प्रारम्भिक शिक्षादीक्षा भारतीय सीमावर्ती बजार जयनगरभन्दा दक्षिणको गाउँ राजनगरमा भयो । उनले म्याट्रिक त्यहीँबाट गरे । राजनगरको रामेश्वर हाइ इङ्लिस स्कूलबाट उनको विद्यालय शिक्षा पूरा भयो । म्याट्रिक सिध्याएपछि उनी आईएससी पढ्न भागलपुर गए । त्यहीँबाट उनले बीएससी डिस्टिङ्सनमा पास गरे ।
उनका पिताजी शिक्षित थिए । त्यसैबेला बीएड पास गरेका । शिक्षित भए पनि गाउँमा खेती किसानीमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक थियो । उनका पिताजीको सोच फरक थियो । त्यही सोचले गौरीशंकरलाई मेडिकल अध्ययनको बाटो खुलायो । त्यसो त उनको नाम इन्जिनियरिङमा पनि निस्किएको थियो, तर एकवर्षे प्रिमेडिकल कोर्स गरेर उनी पटना मेडिकल कलेज भर्ना भए । सन् १९४६ मा प्रिमेडिकल कोर्स गरे । सन् १९४७ मा उनी पटना मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस भर्ना भए । आजभन्दा ७० वर्षअगाडि मेडिकल कोर्समा भर्ना हुन सहज थिएन । भन्छन्, ‘माक्र्सकै आधारमा इन्टरभ्यु लिएपछि एमबीबीएसमा म भर्ना भएँ । त्यसबेला साइन्समा राम्रो नम्बर ल्याउनुपथ्र्याे । कोलम्बो प्लान सुरु भइसकेको थिएन । त्यसैले पनि राम्रो नम्बर ल्याउने मात्र मेडिकल पढ्ने प्राथमिकतामा पर्थे ।’
त्यसबखत पटना मेडिकल कलेजमा पढ्ने नेपालीमा डा. नागेश्वरप्रसाद सिंह पनि थिए । उनी गौरीशंकरका सहपाठी थिए । सोही कलेजमा कल्याणमणि दीक्षित, लक्ष्मीनारायण प्रसादहरु पनि थिए ।
त्यो समय एमबीबीएस अध्ययनमा लाग्ने खर्चको कुरो उठ्नु अन्यथा थिएन । डा. गौरीशंकर हाँसे । उनका अनुसार त्यस बेला महिनाको ७०÷८० रुपैयाँले काम चल्थ्यो । त्यो रकम इनरवाबाट उनका पिताजीले पठाउँथे । त्यो बेला थोरै पैसामा धेरै काम हुन्थ्यो । उनका अनुसार महिनाको ८० रुपैयाँको व्यवस्थापन पनि गाह्रै थियो ।
डा. गौरीशंकरलाई वीर अस्पतालको प्रारम्भिक दिनको खुब याद आउँछ । भन्छन्, ‘त्यसबेला चिकित्सकहरु अधिकांशः भारतबाटै आएका थिए । केही नेपालीमध्ये डा. भरतराज वैद्य त्यसबेला बाहिर पढ्न जानु भएको थियो । अर्का नेपाली डा. यज्ञराज जोशी र डा. दिनेशमान वैद्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसअरु त बंगाली डाक्टरहरु एसएल दास गुप्ता र डा. मजुमदार हुनुहुन्थ्यो । डा. मजुमदार सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो । वीरमा हाम्रा बोस ।’
उनले एउटा पुरानो घटना सम्झिए । एकजना हाइड्रोसिलका बिरामी अस्पताल आए । अपरेसन गर्नुपर्ने देखियो । अपरेसन गर्न डा. मजुमदार अगाडि सरे । बिरामीलाई बेहोस पार्न क्लोरोफार्म सुँघाउने चलन थियो । एनेस्थेसियाका डाक्टर थिएनन् । त्यसैले एकजना पियनले बिरामीलाई क्लोरोफर्म सुँघाए । तर मात्रा मिलेन सायद । ती बिरामी बेहोसीमै बिते । यो घटनाबाट व्यापक हल्ला मच्चियो ।
डा. गौरीशंकर टोखा अस्पताल पुगेपछि छाती रोगकै बिरामी जाँच्न थाले । टोखा सेनिटोरियम १९९१ सालमै खुलेको थियो । चन्द्र शमशेरकै पालामा सेनिटोरियम खोल्ने भनिए पनि १९९१ सालमा त्यसको उद्घाटन भयो । टोखा अस्पतालको उद्घाटन हुँदा जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यहाँको हावापानी राम्रो भएरै टोखामा अस्पताल खोलिएको डा. गौरीशंकर बताउँछन् । टोखामा उनले लामो समय काम गरे । त्यहीँ कार्यरत रहँदा नै उनी विशेषज्ञता हासिल गर्न बेलायत गए । त्यहाँ उनले ‘डीटीसी’को तालिम पनि लिए । त्यसबेला उनलाई बेलायत नै बस्न भनिएको थियो । तर उनी बसेनन् । उनलाई आफ्नै माटोले तान्यो । उनी टोखा अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसम्म भए ।
यातायातको असुविधा भएको समयमा टोखा टाढै लाग्थ्यो । त्यही भएर डा. यज्ञराज जोशीले सहरमै एउटा क्लिनिक खोले । त्यहाँ छाती र टीबीका बिरामी जाच्न सुरु भयो । यो सरकारी चेस्ट क्लिनिक थियो । डा. गौरीशंकर भन्छन्, ‘सायद डा. जोशीले ००७ तिर त्यो सरकारी चेस्ट क्लिनिक खोल्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले त्यसको नाम दिनु भयो ‘ज्ञानेन्द्र चेस्ट क्लिनिक’ । किनभने, त्यसबेला ज्ञानेन्द्र गद्दीमा थिए । केही समयपछि ज्ञानेन्द्रको नाम हटाएर ‘सेन्ट्रल चेस्ट क्लिनिक’ नाम राखिएयो ।’ पछि डा. गौरीशंकर पनि चेस्ट क्लिनिकमा सरुवा भएर आए । करिब ८ वर्ष टोखामा बसिसकेपछि उनको सरुवा सहरतिर भएको थियो । त्यसको पनि रमाइलो कथा रहेको उनी सुनाउँछन् ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । विभिन्न व्यक्ति सत्तामा आए । त्यहीबेला डा. गौरीशंकरका सहपाठी डा. नागेश्वरप्रसाद सिंह स्वास्थ्यमन्त्री भए । आफ्ना सहपाठी मन्त्री बनेपछि डा. गौरीशंकर नागेश्वरलाई बधाई दिन पुगे । त्यसैबेला नागेश्वरले ‘म तिम्रो सरुवा गरिदिन्छु’ भनेका थिए । उनको सरुवा सेन्ट्रल चेस्ट क्लिनिकमा भयो । टोखामा अर्को डाक्टर पठाइयो । त्यसपछि उनी भिजिट गर्न मात्रै टोखा पुग्थे । त्यसै समयमा टोखा सेनिटोरियम र सेन्ट्रल चेस्ट क्लिनिकलाई गाभ्ने काम भयो । डा. जोशी स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टर भए, डा. गौरीशंकर चेस्ट क्लिनिकको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट ।
कुराकानीकै क्रममा एउटा अर्को रोचक प्रसंग पनि उनले सुनाए । उनी चेस्ट क्लिनिकमै रहँदा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए विष्णुकुमार तुम्बाहाम्फे । उनकी पत्नीलाई टीबी लागेको थियो । उपचार काठमाडौंमै भइरहेको थियो । तर खासै प्रभावकारी उपचार हुन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि मन्त्रीले आफ्नी पत्नीलाई भेलोर पठाउने भए उपचारका लागि । मन्त्रीको वचन हार्न नसकी डा. गौरीशंकर पनि भेलोर गए ।
पुरानो कुरा सम्झँदै हाँस्दै उनले भने, ‘मन्त्रीले जानुस् भनेपछि जानैपर्‍यो । त्यहाँ गएपछि रोगमा सुधार भयो । बिरामीलाई राम्रो भएपछि हामी फर्कियौं । त्यसको केही समयपछि नै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले मलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टर बनाइदिनु भयो । र, यज्ञराज जोशीलाई सेन्ट्रल चेस्ट क्लिनिकमा फिर्ता पठाइदिनु भयो ।’ तर केही समयपछि मन्त्रालयको सचिवमा अर्कै व्यक्ति सरुवा भएर आए । लगत्तै डा. यज्ञराज महानिर्देशक भएर विभागमा फर्किए । डा. गौरीशंकर निर्देशककै रुपमा कार्यरत रहे ।
डा. गौरीशंकरका अनुसार त्यसबेला सबै डाक्टर राम्रा र कुशल थिए । तथापि, डाक्टरहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना भने व्यापक थियो । डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे र डा. यज्ञराज जोशीबीचको दूरी बाहिरैबाट देखिन्थ्यो । यसको कारण दरबार भएको डा. गौरीशंकरको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार पहिले दरबारमा डा. जोशीको पहुँच थियो । पछि डा. पाण्डेलाई दरबारले रुचाउन थाल्यो । डा. पाण्डेले राजपरिवारको मन आफ्नो कामबाट जित्दै गए । यसले दुईजना राम्रा डाक्टरबीच विवाद पैदा गरिदिएको थियो । पछि डा. नागेश्वर सिंहले यसलाई थामथुम पार्न धेरै मद्दत गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै डा. पाण्डे र डा. एसके पहाडीका बीचमा सर्जनहरु डा. एके शर्मा र डा. डीएन गोंगलका बीच पनि सम्बन्ध राम्रो थिएन ।
उनी भन्छन्, ‘मेरै पनि डा. यज्ञराजसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यो सबै घटना एकआपसमा प्रतिद्वन्द्वी भावना जागृत भएका कारण नै हुन पुगेको हो । आफू उत्कृष्ट चिकित्सक भएको प्रमाणित गर्न सबैले खोज्थे । यसैको परिणाम बाहिर आउँथ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि त्यसबेला काम गर्ने वातावरण राम्रो रहेको उनी बताउँछन् । धेरै डाक्टर नभएकोले पनि काम गर्न सहज थियो । आफूलाई उत्तम साबित गर्न सबै लागिपर्थे । साधनस्रोत र प्रविधि नहुँदा पनि रोगको निदान भएकै थियो । बिरामीलाई निको भएकै थियो ।
विषेशगरी रोगको निदान गर्न प्रविधिको सुविधा त्यसबेला खासै थिएन । यस्तो हुँदा पनि काम गर्ने आँट र हौसला सबैमा थियो । टोखा अस्पतालमा केही सुविधा थियो । ‘टोखामा कफको जाँच त्यसैबेला गरिन्थ्यो । एक्स रे पनि हुन्थ्यो । रगत पनि जाँचिन्थ्यो । ल्याबोरेटरीको व्यवस्था पनि थियो । बस् प्राविधिकचाहिँ थिएनन् । सबै काम आफैले गर्नुपथ्र्यो । आफै रगत निकालेर प्याथोलोजिकल टेस्ट गर्नुपथ्यो,’ डा. गौरीशंकर भन्छन् ।
विस्तारै डा. गौरीशंकर प्रशासनिक सेवामा सक्रिय हुँदै गए । तर उनले प्राक्टिस छोडेनन् । फुर्सद मिलाएर बिरामी पनि जाँच्दै गए ।
एक पटक विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्लानिङ सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । त्यो सेमिनारमा मन्त्रालयले डा. गौरीशंकरलाई पठायो । त्यसपछि उनी योजना विभागमा सरुवा भए । त्यहीबेला उनले स्वास्थ्य सेवाका लागि दीर्घकालिन योजना बनाए । यस्ता योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो ।
सरकारी काम, अघि बढ्दै जाँदा अलिकति तल–माथि हुनु स्वाभाविक थियो । ती दिन सम्झँदै डा. गौरीशंकर केहीबेर मुस्कुराए । भने, ‘हेर्नुस, कालक्रमले त्यसैबेला डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मेरो राजिनामाको चिठी उहाँको टेबुलमा पुगेछ । अनि उहाँले मलाई राजिनामा फिर्ता लिन भन्दै तपाईंलाई अर्को ठाउँमा सेट गर्छु भन्नुभयो ।’
२०३४ सालतिर सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भयो । डा. गौरीशंकरलाई त्यतै लगियो । उनी परिषद्को स्वास्थ्य सेवा समन्वय समितिमा सदस्य सचिव भए । त्यहाँ काम सुरु गरेको केही वर्षपछि उनलाई लोकसेवा आयोग पठाइयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उनलाई लोकसेवामा नियुक्त गरे, ०३५ सालमा । उनी २०४७ सालसम्म लोकसेवा आयोगको सदस्य रहे ।
उनी भन्छन्, ‘मैले लोकसेवा आयोग छोडेको करिब १० वर्षपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानव अधिकार आयोगमा पठाउनुभयो । त्यहाँ मैले एक अवधि काम गरेँ ।’